Ny zavatra hitanao dia fanatontosana 'ny fitsapana indroa' Martin Vrijland
Home » ankapobeny » Ny zavatra hitanao dia fanatontosana 'ny fitsapana indroa'
Ny zavatra hitanao dia fanatontosana 'ny fitsapana indroa'
Navoaka tamin'ny Nov 5, 2014 ao ankapobeny, Ny sata satriny, Ambony avo kokoa |
Ny zava-drehetra manodidina anao, na ny vatanao, dia vao noforonina rehefa hitanao izany. Tena fanambarana feno fahasahiana izany. Na izany aza, ity fanambarana ity dia tohanan'ny fikarohana ara-tsiansa eo amin'ny sehatry ny physique quantum. Ireo mpitsikera fizahan-tany manerana izao tontolo izao dia namerimberina imbetsaka ity fitsapana manaraka ity, satria nitarika ho amin'ny tsy finoana sy tsy nahagaga izany. Izany dia zavatra hita fa misy fiantraikany lehibe kokoa noho ny fahitana ny tany manodidina. Ny fitrandrahana dia miorina amin'ny fitsapana tena tsotra nefa tsotra. Mba hahalalanao tsara izany dia mila mahafantatra zavatra momba ny onja ianao. Betsaka ny zavatra eo amin'ny fiainana dia mirakitra fihetsiketsehana. Ny feo dia onjam-pihetsika. Ny teny hoe vibration na vibration dia ampiasaina ihany koa. Ny fikikisana na vibrant ny kofehy gitara dia mahatonga anao hihaino feon-javatra iray. Ny fibobohan-tohatra (mibaribary) ny membranan'ny mpandahateny ao amin'ny rafitra stereo dia manome antoka fa maheno feo ianao. Mandehana mandeha biriky amin'ny hetsika fampisehoana na dihy ary ho tsapanao ny fihenan'ny baomba mandehandeha amin'ny vatanao. Afaka mihamafy na manitatra ny onja. Ny sary etsy ambany dia mampiseho fa ny tohatra roa amin'ireo onja ireo dia miha-miakatra (havia) ary ny onja izay tsy manakorontana (eo ankavanana) ny tampony sy ny lohasaha (ankavanana).
Ny fanandramana izay nahatonga ilay fiantraikany goavana teo amin'ny tontolon'ny siantifika dia fantatra amin'ny anarana hoe 'The Double Slit Experiment' (adikantsika maimaim-poana: ny fanandramana 'double slit'). Hanandrana hanazava ity fanandramana ity amin'ny fomba mazava ho an'ny rehetra aho. Voalohany aloha, tokony ho takatrao fa efa ela ny mpahay siansa no nihevitra fa zava-dehibe izany. Ny atoma dia mifototra amin'ny fototry ny elektronika manodidina azy. Ny singa rehetra mamorona atoma dia noraisina ho mafy orina. Ny 'Double Slit Experiment' dia fanandramana izay mitaky fanazavana sasantsasany voalohany, saingy mandritra ny fotoana voatahiry dia tadidio izay nolazaiko momba ny 'raharaha' sy ny endrika efa voafaritra mialoha.
Raha mikendry basy ping-pong ianao eo amin'ny rindrina misy takelaka misy faritra roa eo anelanelany, dia hiseho eo amin'ny rindrina ny lamina rehefa hitanao amin'ny farany. Ny mpilalao golfa iray ihany koa dia mamela anao hitifitra baolina maromaro izay mahita andalana fotsiny amin'ny lavaka eo anelanelan'ny rindrina, ka miteraka lamina hita maso eo amin'ny rindrina. Ny vokatr'izy ireo rehefa miparitaka amin'ny teboka roa ianao, dia misy tsipika roa mifanohitra eo amin'ny rindrina.
Moa ve ianao manao toy izany koa fanandramana amin'ny ahevaheva toy ny hetsika, ka ohatra, amin'ny rano, alon-drano na onjam-peo, ny vokatra azo dia hafa tanteraka modely teo amin'ny rindrina aoriana. Ary rehefa mandroaka ny tsy misy kilema onja eo amin'ny fizarazaran'I ary izany dia voatery mba handeha hamaky ny slots, dia Toa avy izay manamafy tsirairay amin'ny sasany hevitra ao ambadiky ny fizarazaran'I sy roa onja mando avy amin'ny hafa hevitra (araka ny hazavaina ao amin'ny ambony havanana sary). Izany dia mamorona lamina iray eo amin'ny rindrina aoriana izay tsy mitovy amin'ny zavatra azonao rehefa manisy fikirizana matanjaka eo amin'ny faritra. Vokatr'izany, dia nisy rantsana roa lehibe teo amin'ny rindrina. Ny sary etsy ambany dia mampiseho ny sary azonao rehefa mandefa onjam-peo eny amin'ny rindrina miaraka amin'ireo faritra roa.
Ankehitriny dia tonga tampoka ny fahagagana hitan'ny mpikaroka rehefa nanao toy izany tamin'ny electron ihany izy ireo. Ny fiandrasana dia ny vokatra mivaingana dia mety miteraka vokatra mitovy amin'ny dian-tongotra roa eo an-damosin'ny bala amin'ny golf. Hatramin'izao dia heverina fa zava-dehibe ny 'olana'. Gaga ny rehetra, ny voka-dratsin'ny solika - ny elektronika - na izany aza, mba hampisehoana ny laminan'ny vokatry ny hetsika onjam-peo teo amin'ny rindrina. Nisy fahagagana lehibe hafa koa rehefa nodinihina ilay fanandramana. Raha ny marina, ny fahalalana dia ny fahalalana. Noho izany, napetraka tao amin'ny efamira ireo mpamantatra, mba ho hitan'ny olona iray tsara hoe aiza no misy elanelana mandeha. Azonao atao, ohatra, ny mamehy ny elektronôna rehetra izay voatifitra ka nizarazara izy ireo teo amin'ny rindrina. Ny mahagaga dia ny vokatra, satria vokatry ny fandrefesana, tampoka teo dia tsy hita intsony ny lamin'ny fifandonana teo amin'ny rindrina aoriana (toy ny onja), fa ny laminasa izay tena mafy.
Nihanitombo ny fanandramana. Ny fanandramana dia natao tamin'ny 102 ary nanao vokatra isaky ny valopy lehibe nofehezina misy valopy roa kely. Ny valopy kely (ao anatin'io fehezanteny lehibe io) dia nahitana ny valiny azon'ireo elektronika mamakivaky ireo efamira. Ny valopy kely hafa dia ny lamina eo amin'ny rindrina aoriana. Rehefa nanokatra ny valopy voalohany sy farany teo amin'ilay andian-dahatsoratra, dia novelarina ny valopy kely. Samy nodinihina ny valin'ny fizarana sy ny lamina teo amin'ny rindrina aoriana. Ao amin'ireo tranga roa ireo, dia nahita ny lamina teo amin'ny rindrina aoriana izay mifanaraka amin'ireo andalana roa mifanaraka amin'izay andrasanao mafy. Ny 100 sisa tavela lehibe dia nizara ho vondrona roa an'ny 50. Ny valin'ny fitomboana ny valopy 50 voalohany dia nesorina tao amin'ny valopy lehibe ary nijery. Taorian'izay dia nodinihina ny valin'ny rindrina aoriana ary isaky ny misy ny tsipika roa tonta. Nisy zavatra hafa natao tamin'ny valopy 50 hafa. Ny vokatra azo avy amin'ny valiny dia nodorana ary tsy nijery izany. Avy eo dia nalaina tao amin'ny valopy ny valin'ny rindrina. Ary inona araka ny eritreritrao no jerena? Mazava loatra, ny lamina izay an'ny hetsika onjam-peo.
Ho gaga toa anao aho ary mety mieritreritra hoe: "Tsia, tsy azo atao izany, tsy maintsy nisy ny tsy fanandramana amin'ny asa."Tsia, miresaka momba ny fanandramana ara-tsiansa lehibe izay efa natao matetika izahay noho io antony io. Tsy mino an'izany ny olona. Midika izany fa ny solontenan'ny elektronika dia maka endrika matevina rehefa jerena. Ny fotoana ny fandrefesana vokatra (Fiambenana) tsy ho jerena - na dia ny experimenter nahatanteraka - Maneho ny elektronika tao amin'ny tsy mafy orina endriky ny hovitrovitra. Wow! Revolisionera izany. Noho izany, ny zavatra rehetra hitantsika dia miorina rehefa mijery izany isika? "Ahoana anefa izany? Miaina ao anatin'ny tontolo iray izay napetraka ny zava-drehetra manodidina antsika? Azo itokisana ve izany? Hitako tsara izany?"
Avelao hipetraka aloha ireo voalaza ireo. Mazava ho azy fa fampidiran-dresaka iray ho an'ny tantara manaraka izay hanamafisako ny antony mahatonga anao hahita sy eritreretinao hoe izao tontolo izao azo tsapain-tànana na izao tontolo izao hita maso dia fanehoana fotsiny ny fampahalalana nomen'ny mpandefa anao. Izy io dia mamorona ara-bakiteny raha ny azonao raisina avy amin'ny 'sahan-kevitra' izay manodidina antsika. Ny zava-misy iainanao dia tsy inona fa ny zavatra izay tsy misy afa-tsy rehefa jerena ny electron. Ny sainan'olombelona dia mpanelanelana / mpandray feo izay hita ao anaty sehatra informatika ary mitarika ny zava-misy avy amin'io sehatra informatika io. Izany sehatra izany dia manana fiantraikany lehibe amin'ny zava-misy iainantsika. Ohatra, raha zara raha misy orinasa na angon-dàlana - toy ny efa nolazaiko matetika tao amin'ny famaritana ny 'Satin-moon matrix' - Ny fisehon-tenantsika sy ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao dia mety ho maratra na ho kivy. Rehefa niverina tamin'ny fifandraisana tamin'ny fahatsiarovanay anay tao amin'ny tsiambaratelo tsy hacked ny sehatra informatika (loharanom-baovao) izahay dia mpamorona ny zava-misy mahafinaritra mahatalanjona miaraka amin'ny fahafaha-manao tsy manam-petra.
Ho an'ny fampahalalana momba ny rakitra dia azonao atao koa ny mijery ity version ity: eto
All Shares 344
moraya6 / Novambra 5, 2014
http://www.bibliotecapleyades.net. Fanazavana momba ny tsy firaharahiana ny fahitana
Ity no fomba fampiharana
Albert Einstein ... Ity Universe izay antsika ity ... .. - http://pinterest.com/pin/358458451565520621/?s=3&m=wordpress
Fahaiza-mitandrina amin'ny fomba fohy fito - http://pinterest.com/pin/358458451565490249/?s=3&m=wordpress
Nikola Tesla nilaza fa tsara indrindra izany, "manomboka mandinika ny fisian'ny siansa tsy miangatra ny siansa androany, dia handratra ..." http://pinterest.com/pin/358458451565331488/?s=3&m=wordpress
Rohy / Novambra 5, 2014
Ny zavatra rehetra izay nieritreritra, na nofinofy na ho avy dia efa voaorina ao amin'ny eter. Ny elitika dia mampiasa ny fampahalalam-baovao hampiasa ny eritreritsika hamolavola ny baikon'izao tontolo izao. Izany no mahatonga hevitra hafa tsy mahazo sehatra ao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra, izay mety hanohitra ny rafitry ny NWO.
Voalaza fa zava-miseho daholo ny zava-drehetra; Ao anatin'ity tantara ity dia misy tranga maromaro farany azo atao, toy ny loza voajanahary, fanafihana avy any ivelany, na ady lehibe iray. Ny safidy izay hiafara amin'ity fotoana ity dia miankina amin'ny eritreritry ny vahoaka. Satria fantany fa ny haino aman-jery dia tarihin'ny media.
Izany ihany koa no lazaiko, tsy mila miady amin'ny elitika isika, tsy maintsy mijery fotsiny ny ho avintsika isika raha tsy misy azy ireo ary avy eo dia vita izany. Ao anatin'izany ny tahotra lehibe indrindra izay anombohan'ny olona ny mieritreritra. Ny fiarahamonintsika manontolo dia miorina eo ambonin'io biby fiompy izay mieritreritra ny zavatra andrasana aminy.
Raha ny marina, ny fanonganam-bolo eo amin'ny loha. Manova ny tontolo manerantany manerana izao tontolo izao (miova ny fomba fijery) ny zava-misy.
Marioana / Novambra 6, 2014
Tena mino an'izany koa aho! Tsy ilaina ny ady, raha misaintsaina sy mahita sary isika dia miandrandra fialam-boly. Ary mbola maro an'isa any Holandy izao no manao izany: http://stadsverlichting.nu/. Ny zava-drehetra dia hery, ary koa eritreritra.
Vakio koa ny horonan-tsarimihitsy Anastasia nataon'i Vladimir Megre, izay nohazavaina tsara ary manome fanantenana be ho an'ny ho avy.
Nefa hijanona miaraka amin'izany aho; Voalohany dia tsy maintsy misy ny tsirairay hoe ny Unity Consciousness, fa ny vody japoney maro dia mbola feno poizina (fluoride, e-tarehimarika, fahitalavitra TV, alcohol etc.).
Hery sarotra izay ahitanao ny tenanao ihany koa ary mieritreritra aho fa olona maro no te-hitoetra matory. Kognitive dissonance eo an-tampony. Fantatr'izy ireo an-tsokosoko fa diso ny zavatra maro, nefa aza manahy, satria izany koa ny dingana ao anatiny.
realfraggy / Novambra 5, 2014
Toppie! Lahatsoratra tsara iray izay manery ny olona hieritreritra zavatra manan-danja toy ny hoe: "Iza moa aho" ary "Ahoana no iandraiketan'izao tontolo izao?" Satria mbola misy ny olona efa manana taona maro, mbola tsy mahalala flicker : oD
Na hoe: "Arakaraka ny hianarantsika no hitantsika fa tsy dia fantatsika loatra!"
schnijder / Novambra 5, 2014
Nilaza i Nietzsche fa nampitahain'izy ireo ny fampitahana fa miaina ao amin'ny nosy iray fahalalana an-dranomasina isika tsy mahalala ny momba antsika.
Ankehitriny, ny lehibe kokoa, ny fantatsika kokoa, ny lehibe kokoa ny nosy, fa ny sisintanin'ny nosy miaraka amin'ny ranomasina ihany koa. Raha fintinina, ny fantatsika bebe kokoa, ny mbola tsy fantatsika.
Donquijotte / Novambra 5, 2014
Ny hany zavatra fantatro fa azo antoka dia hoe tsy mahalala na inona na inona aho.
Bad Karma / Novambra 5, 2014
Hevitra sarotra. Dr Quantum nanazava izany tamin'ny fomba tsotra ...
Elvetwelve / Novambra 5, 2014
sarimihetsika mahafinaritra mahafinaritra ary tena manintona !!!
Mariho ny fiandohan'ny fehezanteny 2:
Ny fitaovana no vokatra manan-danja indrindra amin'ny atin'ny olombelona.
Ny tanjona faratampony dia ny fifehezana tanteraka ny tontolon'ny zavaboary, ny fampiasana ny maha-olombelona ho an'ny olombelona.
Io lehilahy io dia satroka ala efa ela talohan'ny vanim-potoany!
Milaza ny aloe aho, satria amin'ny fotoanantsika dia mety ho lazaina ho toy izany izy! Kanefa io lehilahy io dia tena jeneraly, mpahita lehibe! Ary tsy maintsy nandoa izany tamin'ny fiainany izy.
Ny hany fitaovana lehibe indrindra dia ny "hamotika" azy ireo (elektrisite tsy misy) ary ireo paty "bebe kokoa" 700 (WTF ??? Yup, maro ireo!) Afaka nitondra "azy ireo" lavitra an'ilay lehilahy.
Lehilahy tia lehilahy izy. Nahatsapa zavatra (vibrations) tsara izy!
Hatreto aloha dia te hampandefitra ny fisainana sy ny zava-misy aho.
Ny fanaintainana dia toy ny mahatsapa ny fitiavako efa nahafoy ahy (ny ankamaroany tena nampiharina ???? ????), na ny loza mahazo miaraka amin'ny scooter Ary manarakaraka ny rovitra kibo rindrina, torotoro sy ny hato-tongotra, na ho avy ihany tena ho ahy. Amiko raha nosamborina na nampijalian'ny mpiasan'ny cia aho, na Al Nusra, izay antsoina koa hoe AL Quaida, ISIS, antsoina hoe IS, koa ...
Saingy, raha manomboka manomboka mieritreritra ny hafa ary miombom-pihetseham-po amin'ny MSM, ny olombelona dia afaka mifindra any amin'ny toetry ny vibration, izay hiady sy hanafoana tanteraka ireny fanararaotana ireny.
Moa ve io fanantenana io sa tena misy ?!
realfraggy / Novambra 6, 2014
"... dia mbola velona eo anilako sy ny tongotra tapaka."
Noho izany, dia niaina tamin'ny fiainan'ny filozofa Shinoa Zhuangzi ihany koa izy raha nanonofy fa lolo toy ny lolo izy:
Indray andro dia nanonofy i Zhuangzi fa lolo, izay tsy nahalala na inona na inona momba an'i Zhuangzi intsony. Rehefa nifoha kosa i Zhuangzi, dia tsy fantany intsony raha lolo no nofinofiny fa Zhuangzi, na Zhuangzi izay nanonofy lolo iray.
Raha vao tena manana nofinofy mazava ianao, na iray tena mavitrika, dia ianao irery no tena misalasala. Ny famokarana ny takolaka dia tsy manampy amin'ny rehetra, satria ao amin'ny nofinao dia mahatsapa ny alahelonao ianao !!!!
Ary amin'io ohatra manavaka ny lolozy io dia anontaniana ny fanontaniana raha marina ny ONE REALITY fa TSY MAHOMBY IANAO.
Fa mba hahatonga azy ho sarotra kokoa: ny zava-misy dia miseho ao an-dohanao. Noho izany dia tsy afaka ny hiady hevitra ianao fa tena zava-misy marina ny zava-mitranga eo amin'ny lohanao. Angamba ny zava-drehetra dia nofinofy ary ny hafatra izay vakinao amin'izao fotoana izao dia ampahany amin'ny nofinao!
Mety "mahatsapa" ianao fa tsy marina izany, nefa tsy afaka manaporofo izany mihitsy ianao! Filozofa maro no efa nanandrana izany ho anao ary tsy nahomby! Tsy afaka manaporofo ny PERFINITIONY ianao satria mahatsapa ny zava-misy ao an-dohanao. Inona no hitanao toy ny volon'ny manga, angamba aho mahita izany ho toy ny loko mena, na dia samy mitovy loko ANTSOINA (fifanarahana amin'ny fanomezana anarana) isika, tsy afaka ny ho azo antoka fa manana ny mitovy loko ihany koa ny hahita toy izany koa.
Noho izany ... "Tsy misy sotro!" Mety ho anao loatra, saingy manontany anao aho hoe: "Ny sotro iray izay hitanao ve dia ilay sotro iray izay hitako ihany koa? Sa ny "sotroiko" no tsy mitovy? ​​"- ny valiny dia tsy azonao fantarina izany!
AntiSoof / Novambra 5, 2014
Tsy azoko. Namaky boky momba ny Fizika sy ny tenany atsangana hitondra tonga teo amin'ny famaranana fa ny fandrefesana ny sombiny fananany 'voafidy' mety amin'ny sombiny, ny onja na "raikitra" toetra, toy ny onja rehetra herinaratra dia sady ahevaheva sy ny sombiny . Noho izany, raha mahita ny onjam-peo dia tsy mahita ny ampahany ary raha mahita ny ampahany (miaraka amin'ny fitaovana) ny onja dia tsy any intsony. Ny fiheverana dia mitarika ny onjam-pihetsika satria tsy azo atao ny famonoana tsy misy herin'aratra. Takatro izany.
M. / Novambra 5, 2014
Eny, miala tsiny aho milaza izany, saingy tsy misy ratsy amin'ny mekanika quantum.
Ny fanazavana tsotra: Ny ankamaroan'ny olona eto dia mahafantatra fa misy elit anankiray izay
te-hitandrina ny zavatra miafina aminay.
Ny zavatra farany tokony hataon'izy ireo dia ny hampahafantatra antsika ny tena fizika!
Ny zavatra hafa dia mihamitombo, fa ny tena azo antoka dia marina izany.
Ny mekanisma quantum dia tsara am-pandrosoana, toy ny teorinan'ny kofehy sy ny fanadalana sy fako hafa.
Tena gaga aho fa foana "Mifohaza olona" mbola tsara tarehy mora ao amin'ny "siansa" zaridaina, saingy siansa maoderina dia na inona na inona, fa ny fitaovana ny vato nasondrotry ny hamitaka antsika sy amin'ny houden.Het ny ankamaroan 'ny zavatra nianaranao Ny 'siansa' dia tena diso. Atsangana hitondra haihetsika tsy mety, ny teoria ny fihetsehan'ny zavaboary dia marina tsy misy kitay, ny fampianarana momba ny evolisiona no tsaho, dia nahazo anareo tany, maneran-/ fiakaran'ny maripanan'ny / fiovaovan'ny toetr'andro madio misy dikany (VAT tena tonga ny ranomandry taona! Moa mialoha sahady 10 taona lasa izay.) Ny Biggie Bangie dia tsy misy dikany firy, ny lavaka mainty dia tsy misy na aiza na aiza.
Hafahafa? Eny, efa zatra an'izany koa aho, nefa tsy mampaninona raha toa hafahafa izany, fa raha marina izany na tsia.
Raha ny marina, ny haavony atahorantsika dia goavana!
Robert Almere / Novambra 5, 2014
M. misaotra anao noho ny fametrahana zavatra ho amin'ny fomba fijery, tahaka ny hoe i Martin, izay mamirapiratra matetika, no mijery azy, farafaharatsiny miaraka amin'ny fisainana. Na izany aza, toy ny mahita izany eo amin'ny lafiny fihetseham-po, misy zavaboary, izany dia mbola tsy Noho ny Kisendrasendra, sarotra toy izany izao tontolo izao, matetika miaraka amin'ny tsipiriany kely tonga lafatra dia azo nahy miorina, dia mety manamarina statistician rehetra.
Ankoatra izay, i Einstein dia diso, ny haingam-pandehan'ny hazavana dia tsy vitan'ny haingam-pitaovana maoderina, roa ny singa roa azo atambatra amin'ny toerana roa, mitaky haingana tsy misy fetra.
Fantatr'i Darwin fa namolavola teoria izy, tsy nahalala fa ho lasa finoana, fotopampianarana, ary adidy tsy misy atidoha izay nantsoina hoe manam-pahaizana.
Fantatr'i Darwin tsara fa nanambady izy.
Izy io dia avy amin'ny tànan'ny raibeny,
Ny evolisiona dia navotsotry ny "Fikambanana Lunar"
Fantany fa zavatra tsy misy dikany izany, fa izy kosa
dia ary fomba iray mba hisorohana ny tena ara-panahy, ary amin'ny alalan'ity teoria ity no ananantsika
Ny "raharaha" no nanosika.
MineurF / Novambra 5, 2014
Eto dia azo antoka fa misy teboka, avy aiza avy ny rantsan-tongotra izay tonga toy ny feon-tsika fantatsika,
Vao haingana aho no namaky lahatsoratra tsara momba ny fisamboran'ny dinosaure amin'ny fanangonam-bokatra mena. Tsy nisy dinôzôra mihitsy angamba. Tsy misy amam-panahin 'olona efa nahita doka dinôzôra hafahafa.
Misy orinasa marobe manana dinôzôro.
martin freedom / Novambra 6, 2014
Efa nolazaiko fa ny fampidirana fotsiny ity lahatsoratra ity. Ny fizotry ny physique dia napetraka amin'ny làlan-kaleha hafa avy amin'ireo mpahay siansa hafa (jereo eto ambany) ary mazava ho azy fa adihevitra momba ny taona maro. Tsia, tsy mitoky amin'ny siansa mahazatra aho, fa indraindray, ny teoria dia manome anao fomba fitaka izay ahafahanao mametraka zavatra mora kokoa, toy ny sary.
Ny fizotry ny physique dia midika fa mpanome ny "tena zava-misy" isika. Araka ny fijeriko, mpanome fitaovana fampitaovana kokoa isika ary misy fifandraisana amin'ny orinasa marina. Ny fisian'ny fampahalalam-baovao amin'ny ankapobeny dia miharihary amin'ny hoe ny ADN manontolo dia azo adika amin'ny ordinatera code digital. Izany baiko izany dia avy amin'ny saha ambony ihany koa dia azo takarina. Ny tsapako dia milaza amiko fa mifandray amin'ity bio-avatar bion-avatar ity ny lahatsoratra navoakanay voalohany tao amin'ny dikan-tsipika tsy nokarakaraina ary misy fifandraisana marina. Azo antoka fa hosoratako izany.
Martin, raha tsy mijery afa-tsy ny zava-drehetra isika rehefa mijery azy ireny, dia tsy tokony hojerentsika akory na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fijerena ireo "zava-dratsy" izay soratanao matetika momba ny ???
[mandeha ny herinaratra rehefa mihazakazaka ny saina]
Robert Almere / Novambra 6, 2014
@Eleventwelve, "ny angovo alefan'ny fiheverana", tsy dia mampihetsi-po, miteraka famantarana isika, midika ve izany fa tsy afaka hitranga ny tsy fahalalana? (Mitranga izany tantara izany) Na izany indray ve ny fanitsiana malaky iray mba hampitonena ireo mifoha? David Icke koa dia miteny fa manome ny hery tsy refesi-mandidy isika amin'ny alàlan'ny fifantohana. Hirahira aho, izany no izy, mahatsikaiky.
Mety misy olona milaza amiko hoe aiza ny tohodrano amin'ny endrika hafa?
Mihevitra aho fa ny fonay. Tsy vitan'ny hoe mahita ny fanatanjahantena fa koa amin'ny ditra hafa amin'ny herin'ny fo.
Ny saina dia avy amin'ny Demiurge. Ny loharanon'ny loharano.
Nomeny ny heviny izahay.
Noho izany dia mila mandao ny herin'ny Fanahy amin'ny fo isika ary mampifandray amin'ny Source
Ny kely kokoa ny Computer sy ny iphone mifampiresaka ary mandeha amin'ny natiora sy ny sisa.
Esory ny voaly na ny famitahana ataony aminao. Ny fiainana tsotra kokoa fa tsy hi-teknolojia bebe kokoa.
Mivavaka izahay ny alina tsara rehetra
Ny tsy fijerena ilay olana dia safidy tsara, heveriko fa indraindray. Jereo fa misy ny olona sasany izay mahafinaritra ny mamorona olana maro eto an-tany. Saingy ny fanimbana ny fiainam-panahy amin'ny olombelona dia roa ihany. Heveriko fa ny gurus sasany dia marina rehefa miteny izy ireo fa ny fahasambarana dia ao amin'ny olombelona. Ny zavatra tokana tokony hatao dia ny hoe 'zavatra'. Mamela ny eritreritra amin'ny fomba ratsy. Nihevitra ny toe-tsain'ny tokony hanao araka ny tiany ny olona, ​​eritreritra dia tsy tokony hisy vokany eo amin'ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao.
Indraindray mieritreritra mihitsy aza aho indraindray fa raha olona manisy ampy hery, fa amin'ny toe-javatra toy ny boky ny fanambarana ireo fanambarana izao no hahazo ny tena hery sy 'mandroso'. Anisan'izany ny horonan-tsary, boky (hafa), fahitalavitra, gazety, sns.
Saingy eny, angamba izany dia tena eritreretina.
Izany no antony itenenako fa tsotra. Ny sakafo, ny fisotroana ary ny tafo eo ambonin'ny lohany dia efa tsara. Ny fahasalamana sy ny fiaraha-mientana dia mahafinaritra ihany koa, ary raha toa ka mahaliana ihany koa ny tombotsoan'ny olona hafa.
Ary aoka ireo mpifikitra dia hankafy ny 'hareny', ara-panahy dia mety ho mahantra izy ireo.
Inona no anananao amin'ny raharaha rehetra raha tsy misy ny fiheverana? Inona no tsy maintsy manandratra ny tenany mihoatra ny natiora? Inona no mendrika hanana fiainana lava raha tsy miaina amin'ny tena izy?
Inona no atao mba hamadihana ny olon-kafa amin'ny fitiavan-tanindrazany? Mety hiverina ny natiora. Ny olona dia afaka mieritreritra be loatra ny tenany, fa izy kosa dia mitoetra ho natiora. Iray amin'ny natiora. Ny iray dia iray. Farafaharatsiny, izany no hitako.
No zava-dehibe aho amin'ny Apokalypsy, izay voalaza momba ny faminaniana ny oh. Nostradamus. Raha ampy ny olona mino an'izany, dia tonga ho azy tena izy na faminaniana mahafa-po. Ka andeha hojerentsika ny hoavy mahafinaritra :-). Isika dia natiora ary iray, rehefa mahatsapa isika fa tonga ao amin'ny "paradisa" tahaka ny namoronana azy io!
Elvetwelve / Novambra 6, 2014
Avelao ho izany!
sablo / Novambra 6, 2014
Raha misy hazo mianjera any anaty ala ary tsy misy olona manodidina azy hihaino izany, moa ve izy manao feo?
Good article Martin. Jereo koa ireto horonantsary avy amin'i Willem de Ridder ireto: http://www.youtube.com/watch?v=eT3xpx9tTFA
Ary zavatra iray hafa, ny fifohazana dia tena haingana izao rehefa mahita izany aho. Angamba zavatra ho anao ianao? http://sg.tudelft.nl/event/willem-middelkoop-patronen-van-bedrog/
Heveriko ho fototra iorenan'ny fahatsiarovan-tena.
Heveriko fa ny fandaniana dia avy amin'ny fahatsiarovan-tena. Tsy afaka ny hitandrina ny fahatsiarovan-tena isika.
Ny zavatra rehetra resahintsika, ny zava-drehetra izay heverintsika ho efa misy, dia mampihetsi-po ny fahatsiarovan-tena.
Rohy hafa mahaliana: http://hetgrotereplaatje.nl/index.html
Gabreal Jones / Novambra 6, 2014
Azafady azafady fa misy zavatra iray azonao takarina, ary izany dia ianao no tsy manan-kaja, tsy manan-danja.
Tsy ao amin'ny vatanao ianao, ny vatanao dia ao aminao!
Ny saina ao aminao.
Mitranga aminao izany.
Satria izy ireo dia mahaliana azy ireo.
Ary mazava ho azy fa ny fiarahaban'i Alexander Smit: loha mazava, fo amam-pihobiana ary ny tanana mirenireny.
Ity dia tena mahafinaritra tokoa androany ... ..
Diewer / Novambra 6, 2014
Tsara tarehy Martin! Taona maro lasa izay dia nahare avy amin'ny olona izay nahita fa ireo fanahy natiora manan'aina ireo 'mifanentana' ny amin'ny miseho ihany ny zavatra andrasana. Izany dia marina tokoa amin'ny toe-javatra voatondro eto.
@ Marioana Misaotra ny rohy amin'i Willem de Ridder; Mahita azy mahavariana aho! Ary ity lahateny mahafinaritra nataon'i Willem Middelkoop!
Marioana / Novambra 7, 2014
Gladly Diewer. Tena mahafaly tokoa ny mihaino an'i Willem de Ridder. Tamin'ny herintaona aho dia nandeha namaky lahateny taminy, tena tsy maintsy. Jereo ny tranonkala: http://www.willemderidder.com/
Eny, mampiseho mazava ahy ny lahatenin'i Middelkoop fa ny fifohazana dia ao anaty fiarandalamby. Tsy azo afindrana intsony, toa.
Rohy / Novambra 7, 2014
Izay indrindra. Tsy olana ny filazana zavatra. Ny zavatra tokana izay nahay ny sainao dia ny vokatra mailaka ny fomba tianao ny hanatanteraka izany. Diniho, ohatra, ny safidy mahery setra amin'ny vahoaka, noho izany revolisiona. revolisiona maro no efa nahalala izao tontolo izao saingy inona no vokany? Mbola ao anaty sambo ihany izahay. Amin'ny hevitro manetry tena, porofoy fa manimba ny fanehoan-kevitra ratsy ny asa ratsy. Inona no tokony ho ahy intsony izahay mahakasika ny tenany efa ho ridiculously manao NWO fa izao tontolo izao dia mahita sary an-tsaina ny tontolo tsy amim-bola, miaraka amin'ny andalana iray monja ihany no nandinika lalina ny rafitra rehetra, manaja ny safidy malalaka ny ny tsirairay raha mbola tsy mandika ny safidy malalaka ataon'ny hafa izy. Ny fametrahana vaovao ratsy dia tsy misy olana raha toa ka tanjona ny hamorona tontolo tsaratsara kokoa. Ny fikasana dia izay raisina. Izany no mahatonga ahy mahatsiaro ny lahatsoratra raha tezitra aho na amin'ny vibe hafa.